အဆိုပါ Selfie ၏သမိုင်းအကျဉ်း
အဆိုပါ Selfie တီထွင်ဘယ်သူနည်း
ကိုယ်ပိုင်ပုံတူသည့် selfie အဖြစ်လူသိများအွန်လိုင်းမှဖြစ်စဉ်များဖြစ်လာ
selfie များသောအားဖြင့်မှန်သို့မဟုတ်လက်မောင်းရဲ့အရှည်မှာကျင်းပမယ့်ကင်မရာကိုသုံးပြီးယူမိမိကိုယ်ကိုပုံတူကိုသင်ကိုယ်သင် ယူ. တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်, များအတွက်ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ selfies ယူပြီးမျှဝေ၏လုပ်ရပ်ကြောင့်သင်တန်း၏, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်နှင့်အတူလူရဲ့အဆုံးမဲ့ညှို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ, အင်တာနက်, Facebook တို့ကဲ့သို့လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရနှင့်မှကျယ်ပြန့်ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါစကားလုံး "selfie" ပင်စကားလုံးများအတွက်အောက်ပါ entry ကိုရှိပါတယ်ဖြစ်သောအောက်စဖို့အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်, နေဖြင့် 2013 ခုနှစ်မှာ "တစ်နှစ်တာ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို" အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်: ပုံမှန်အားဖြင့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် webcam နှင့်အတူ, "တဦးတည်းမိမိကိုယ်ကို၏ယူတော်မူကြောင်းကိုတစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ရန်နှင့် လူမှုရေးမီဒီယာကွန်ရက်စာမျက်နှာအပ်လုဒ်တင်ပြီး။ "
ဒါကြောင့်သူကပထမဦးဆုံး "selfie?" ယူ ပထမဦးဆုံး selfie များ၏တီထွင်မှုကိုဆွေးနွေးတှငျကြှနျုပျတို့ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကင်မရာနှင့်အစောပိုင်းကိုးကွယ်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည် ဓာတ်ပုံများ၏သမိုင်း ဓာတ်ပုံနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပုံတူရှည်လျား၏တီထွင်မှုမတိုင်မီရာအရပျကိုယူပြီးခဲ့ကြသည်အဖြစ် Facebook အ များနှင့်စမတ်ဖုန်းများ။ ဥပမာတစျခုတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုံတူယူသူကိုအမေရိကန်ဓာတ်ပုံဆရာရောဘတ်ကျောနလေိဖြစ်ပါသည် daguerreotype လည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အစောဆုံးဓာတ်ပုံတွေထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည် 1839. အတွက် image ကိုကိုယ်တော်တိုင်၏ (ဓာတ်ပုံ၏ပထမဦးဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သည်) ။
1914 ခုနှစ်တွင် 13 နှစ်အရွယ်ရုရှားက Grand Duchess Anastasia Nikolaevna (1900 ခုနှစ်အတွက်တီထွင်) တစ်ဦး Kodak Brownie box ကိုကင်မရာသုံးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုံတူ ယူ. အောက်ပါမှတ်စုနှင့်အတူမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှဓာတ်ပုံကိုစလှေတျ, "ငါမှာရှာဖွေနေကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ဤရုပ်ပုံကိုယူ မှန်ငါ့လက်ကိုတုန်လှုပ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်။ ဒါဟာအလွန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ " Nikolaevna တစ်ဦးက Selfie ယူဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဆယ်ကျော်သက်ပါပြီမှပေါ်လာသည်။
ဒါကြောင့်ဘယ်သူ Selfie တီထွင်?
သြစတြေးလျခေတ်သစ်နေ့ရက်ကို selfie တီထွင်ဆိုမှုအလောင်းတော်ထားလိုက်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ 2001 ခုနှစ်တွင်သြစတြေးလျ၏အုပ်စုတစု website တစ်ခုဖန်တီးအင်တာနက်ပေါ်သို့ပထမဦးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုပုံတူကူးတင်ခဲ့သည်။ 13 စက်တင်ဘာလ 2002 တွင်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုံတူဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြရန်ဟူသောဝေါဟာရကို "selfie" ၏ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအသုံးပြုမှုကိုသြစတြေးလျအင်တာနက်ဖိုရမ်တစ်ခု (Credit: ABC အွန်လိုင်း) မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါအမည်မသိပိုစတာကတော့သူ့ကိုယ်သူတစ် selfie ပို့စ်တင်နှင့်အတူအောက်ပါ wrote:
um, တစ်အိမ်ထောင်ဖက် 21 မှာအရက်မူး, ငါသည်အကျော် tripped နှင့်ခြေလှမ်းများအစုတခုပေါ် (ရှေ့သွားများဟာအလွန်နီးကပ်ဒုတိယကြွလာတော်နှင့်အတူ) ပထမဦးဆုံးနှုတ်ခမ်းဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့အောက်ခြေနှုတ်ခမ်းမှတဆင့် 1cm ရှည်လျားညာဘက်အကြောင်းကိုအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါအာရုံအကြောင်းကိုစိတ်မကောင်း, တက selfie ဖြစ်ခဲ့သည်။
မျ့ဘဲလျ Wisbrod အမည်ရှိဟောလိဝုဒ်ကင်မရာမင်းသူအနုပညာရှင် selfies ယူပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်မလုပ်ပဲ (မိမိကိုမိမိနှင့်အနုပညာရှင်တစ်ဦး Self-ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံတစ်ပုံ) နှင့် 1981 ခုနှစ်ကတည်းကအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုတစ်ဦးအလားအလာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့နိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်များလွန်း selfies ၏ဆည်းပူးနေပေါင်းသင်းစတင်ပါပြီ။ သူသည်စုံလင်သော selfie ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုယူပျက်ကွက်ပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့ကြိုးစားခဲ့သူကို 19 နှစ်အရွယ်ဒန်နီ Bowman ၏အမှုကိုယူပါ။
Bowman အလေးချိန်ဆုံးရှုံးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျောင်းထွက်ကျဆင်းနေ, နေ့တိုင်း selfies ရာပေါင်းများစွာကိုယူပြီးမိမိအနှိုးနာရီအများဆုံးဖြုန်းခဲ့သည်။ selfies ယူပြီးနှင့်အတူအစွဲအလမ်းဖြစ်လာမကြာခဏခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသွင်အပြင်အကြောင်းကိုတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်။ ဒန်နီ Bowman ကဒီအခြေအနေနှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်။
Virtual Reality ကဘာလဲ?
Freon - Freon များ၏သမိုင်း
ရှမွေလသည် Morse ကနှင့်ကြေးနန်း၏တီထှငျခဲ့
အဆိုပါ Ice Cream ဆွန်ဒါသမိုင်း
တွေ့ဆုံ Ceres သည်တဲ့ dwarf Planet ကို
ဗိသုကာ Sverre Fehn နေဖြင့်နော်ဝေး Glacier ပြတိုက်
အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင် Slave ကုန်သွယ်ရေး: အမေရိကအတွက်ကျွန်အကြောင်း5အချက်အလက်
သိပ္ပံများတွင် Meniscus ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များ
'' မထားရင် '' အဓိပ်ပာယျစာပိုဒ်တိုများ
သမီး မှစ. အဖေမှ 21 ချိုမြိန်ဖခင်များနေ့ Quotes
ဂျိမ်း Buchanan: သိသိသာသာအချက်အလက်နဲ့အကျဉ်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ
Milliliters မှ Microliters converting
သင်ကလက်မှုပညာစီးပွားရေး Start ခင်မှာ Follow 10 ခြေလှမ်းများ
5 Post ကိုဒါဝင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သိပ္ပံပညာရှင်များက
အာဗြဟံသည် Darby (1678 - 1717)
ပထမကမ္ဘာစစ်: Ypres ၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ပွဲ
High School တွင်ကျောင်းထွက်နှင့်ဒုတိယအချန့်စ်ပညာရေး
မင်နီဆိုတာ Duluth တက္ကသိုလ် (UMD) အဆင့်လက်ခံရေး
အဆိုပါငွေကျပ် / T က Extinction Event